Wamkelekile kwiLizwe likaKumkani uMorvan - I-Airbnb
Wamkelekile kwiLizwe likaKumkani uMorvan
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uLinda iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Eyedwa, njengoko isibini, kunye nosapho, kunye nabahlobo. Enoba kokuhamba ekhefini okanye umsebenzi, igumbi wethu yenziwe kuwe. Uza kufumana i iholo yokungena, kukho ikhitshi bexhobile, okulala 2, 1 lokuhlambela, yangasese eyahlukileyo, zonke kwi-74m² yalungiswa ngokupheleleyo.
Umhlaba kaKumkani uMorvan udume ngeecawa zawo, iindlela zokunyuka intaba, imilambo yawo, iimyuziyam zayo. Sukuthandabuza kwakhona, sijonge phambili ekwamkeleni kwaye sikuncede ufumane ummandla wethu omhle.
Kwaye ezantsi kweflethi oza kuhlala kuyo kukho indibano yocweyo ye legos Ewe, iqabane lam, mna kunye nentombi yam eneminyaka emi-6 ubudala siyazithanda iilegos.Kuluvuyo ukuba siza kwabelana nawe ngothando lwethu;
4.72 · Izimvo eziyi-201
Ngokucacileyo ukuba ngeyona ngxaki incinci siya kufumaneka